नायिका शिल्पाबारे नया खुलासाः डिभोर्स पछि छविसंग बिहे, शोनु र शिल्पाको सम्बन्धमा – hamrosandesh.com
नायिका शिल्पाबारे नया खुलासाः डिभोर्स पछि छविसंग बिहे, शोनु र शिल्पाको सम्बन्धमा
काठमाडौं, २८ चैत्र ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्र सधै एउटा न एउटा विषयले तातिरहेको हुन्छ । अझ लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलकै चर्चा परिचर्चा चुलिएको थियो र अझै चुलिदैछ । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल र छाविराज ओझाको बिग्रिएको सम्बन्धका कारण चर्चा र आलोचना निक्कै लामो समयदेखि कायम नै छ ।
अझै पनि शिल्पा र छावि बिचको खटपट किनारा लाग्न सकेको छैन । शिल्पाले आफ्नो कसैसंग बिहे र सम्बन्ध बिच्छेद नभएको भनेर झुटो दावि गरेको थियो तर छाविसंग बिहे गर्नु भन्दा अगाडी नै बिकास बस्यालसंग सामाजिक परम्परा अनुसार वि.स. २०६४ साल असार १४ गतेका दिन बिहे गरेर वि.स. २०६८ भदौ ८ गते सम्बन्ध बिच्छेद भएको थियो । आज त्यो झुटको पर्दा फास भएको छ । छावि र शिल्पा बिचको खटपटको किनारा नलाग्दै शिल्पाको नयाँ काण्ड फेरी बजारमा चर्चामा पाएको छ । अर्थात शिल्पा र छवि बिचको एउटा खटपट नसकिँदै फेरी शिल्पा पाखरेल माथि आर्को चलचित्र निर्मातासंगको सम्बन्धको नयाँ खुलाशा भएको छ ।
धेरै लामो समयदेखि बिबादै बिबादमा अल्झिरहेकी शिल्पा अहिले भारतीय चर्चित भोजपुृरी फिल्म निर्माता शोनु खत्रीसंग लागेको कुराले शिल्पालाई अझ झन बिबादीत बनाएको छ । भारतिय भोजपुरी चलचित्र निर्माता सोनु खत्रीको श्रीमती कोमल खत्रीले रुँदै शिल्पाले आफ्नो पति छिनेको आर्थात खोसेको भन्दै रुँदै मिडियामा आएकी छिन ।
शोनुकी श्रीमती कोमल शिल्पाले आफ्नो जीवन बर्बाद भएको र आफुलाई श्रीमान र बच्चा भए पुग्ने अरु केही नचाहिने भन्दै आफु श्रीमान र बच्चाको लागि बाँचेको भन्दै माया भिख मागिरहेकी छिन । उनले शिल्पाले आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नो बसमा पारेर राखेको आरोप लगाएकीछिन । त्यति मात्रै होईन शोनुकी श्रिमती कोमलले आफ्नो फेसबुकमा आफनो श्रीमान शोनु र शिेल्पाले दशहरा मानाएको तस्बिर राख्दै शोनु र शिल्पा मिलेर आफ्नो जीवन बर्बाद बनाएको आरोप लगाएकी छिन ।
लामो अफयेरपछि शिल्पा र ओझाबीच २०७३ सालको दशैँताका गोप्यरुपमा बिबाह भएको थियो । आपसी विवादको क्रममा हातपात गर्दा कानको जाली नै फुटेको भनेर शिल्पाले विभिन्न मिडियामा बोलिन । श्रीमानले आफूलाई हातपात गरी कानको जाली नै फुट्न पुगेको भन्दै पोखरेलले प्रहरीमा शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेकी थिईन ।